BFS Oo Gudi Uxilsaaray Xaaladaha Amni Ee Dalka Kajira.. | Baahin Media
Baarlamaanka Soomaaliya ayaa labadii kulan ee ugu dambeeyay waxa ay kaga doodaeen Amaanka Magaalada Muqdisho.
Shalay ayaa waxaa hortagay Xildhibaanada Golaha Shacabka Wasiirrada Amniga Gaashaandhigga iyo Taliyeyaasha Ciidamada Soomaaliya waxaana la weydiiyay Su’aalihii ugu badnaa abid ee Masuul la weydiiyo kuwaasi oo qaatay Saacado badan.
Qaar kamid ah Xildhibaanada ayaa sheegay in waydiiyeen Cabashooyinkii ay ka qabeen Shacabka Soomaaliyeed amniga Muqdisho iyo dilalka sida gaarkaa loogu gaysto dhalinyarada Bajaajta uga xamaalata magaalada Muqdisho. Xildhibaanada ayaa sheegay in ay Taliyeyaashu balan qaadeen in falalkaasi ay wax ka qaban doonaan isla markaana shaqaaqooyinkii ka dhacay Muqdisho loo xiray Shaqsiyaad iyo Saraakiil.
Guddoomiyaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal ayaa ugu dambeyntii kulamada amniga looga hadlayay labadii maalin ee ugu dambeysay ay yeesheen Xildhibaanadu waxa uu uxilsaaray Guddiyada Amniga iyo Gaashaandhigga ee Golaha Shacabka in ay ka soo talabixiyaan kanasoo diyaariyaan warbixin waafi ah ee ku qotonta sida loo sugi karo amniga Muqdisho iyada oo aan waxyeelo la gaarsiin Shacabka Soomaaliyeed.